ikhaya / Blog / Akohlulwanga / ISICWANGCISO SOKUZONWABISA
Kwihlabathi lanamhlanje, iimeko zatshintsha emsebenzini kunye nexesha elinye lokufumana inzuzo kushishino kukugcina abasebenzi bonwabile. Ngenxa yoku, ukugxila komqeshi kujonge ngakumbi kwiimfuno zabasebenzi, ukubonelela ngenzuzo kunye namathuba otyalo-mali afanele iimfuno zabasebenzi. Ukusuka koluntu ukuya kwicandelo labucala, kubalulekile ukuba amashishini ahlangabezane nemigaqo yokutshintsha kunye nokutshintsha kwesidingo senzuzo yomqeshwa kunye umhlala phantsi iiplani.
Utshintsho kwimithetho nemigaqo yenza ukuba kube nzima kwaye kube ngumngeni ekuphatheni izicwangciso zenzuzo yabasebenzi. Kwabanini bamashishini, isicwangciso seenzuzo zabasebenzi luxanduva olukhulu. Impilo-ntle yeshishini kunye nabasebenzi isengozini njengoko kusebenza nabasebenzi abanolwazi nabanokuthenjwa xa kufuneka ucwangcisa ikamva labasebenzi. Uxanduva lokugxila lubandakanya ukubek 'esweni izicwangciso zokuthotyelwa kwemigaqo eyahlukeneyo kunye neearhente. Oku kubandakanya ukuphatha umqeshi kunye nomsebenzi wegalelo, uvavanyo lomngcipheko, ukusebenza kunye nabanikezeli benkonzo yesithathu, kunye nemirhumo kunye notyalo mali lwesicwangciso sokubeka iliso.
Kukwakhona nemiceli mingeni yendalo ekukhetheni isicwangciso sokuyila esifanelekileyo ukuze uhlangabeze iinjongo kunye neemfuno zomqeshi kunye nomqeshi kwaye ulungelelanise isicwangciso kunye nabacebisi abanomdla kunye nabanikezeli beenkonzo kwisicwangciso. Ngethamsanqa, https://smartcpa.net/ Unomsebenzi ophicotha izicwangciso zoncedo lwabasebenzi rhoqo ngonyaka. Iingcali zenkampani zisebenza ngenkuthalo ukugcina ulwazi lwimihla ngemihla kwimiba yolawulo kunye nolawulo. Oku kunceda abathengi ukuba balungiselele iinguqu ezizayo kunye nokulungisa ngokufanelekileyo izicwangciso zabo.
Izinto ezibalulekileyo kwiSicwangciso seZibonelelo
I-Smart CPA ixhotywe ngezixhobo kunye nolwazi ukunceda amaqela omqeshi ezi zinto zisisiseko zibalulekileyo ekusebenziseni isicwangciso seenzuzo ezigqibeleleyo:
Ukubonelela ngezibonelelo ezilungileyo kwiziseko zabasebenzi ezixabisa kwaye ziqonde izicwangciso
Ukuxhobisa abasebenzi njengabantu abaphilayo
Ukuqinisekisa ukuba amaqela e-HR ahlaziywa kwaye athobele umthetho we-federal / wombuso.
Ukususa ukudandatheka kunye nokususa umthwalo wolawulo lwe-HR / izibonelelo.
Kukho izibonelelo ezahlukeneyo umqeshi anokubonelela ngazo kubasebenzi. Iziphumo zerhafu kubalulekile ukuba uziqwalasele ngezi zibonelelo.
Iinkonzo Zononophelo Lwabantwana
Indawo yokhathalelo lwabantwana ayisiyonzuzo ehlawulwayo yerhafu, ukuba iinkonzo zinjalo
Ibonelelwe kwindawo yeshishini yomqeshi.
Ilawulwa ngokuthe ngqo ngumqeshi.
Inikezwe wonke umsebenzi ngexabiso eliphantsi okanye elincinci
I-inshurensi yokugula egwenxa
I-inshurensi yokugula egwenxa ihlawulwa ngumqeshi kwaye ithathelwa ingqalelo ngokubanzi njengesicwangciso sokugula, kwaye ngenxa yoko, ayizukuba sibonelelo esirhafisayo.
Imirhumo yobulungu bobuchwephesha ayisiso isibonelelo esihlawulwayo kwirhafu apho lowo ufumana isibonelelo sokuhlawulwa ngokuyintloko ngumqeshi, ocingelwa ukuba kwiimeko ezininzi. Nangona kunjalo, lo mgaqo-nkqubo awusebenzi kwimali yokuqalisa okanye yokwamkelwa, njengoko umqeshwa ethathwa njengowokufumana izibonelelo zokuqala.
Enye inzuzo engabhatalwa rhafu ibandakanya ukubuyiselwa kwemali kuqhagamshelo lwe-Intanethi ekhaya, phantsi kwendawo apho unxibelelwano lufuneka ngokuyintloko ngeenjongo zeshishini.
Izibonelelo ezingabhatalwa rhafu zibandakanya iimali ezihlawulwe kuqeqesho lweshishini kunye nolwazi okanye izakhono ezinxulumene nengqesho. Izibonelelo ezihlawulwayo zirhafu zibandakanya izakhono zobugcisa ezingadibaniyo kunye nezifundo kwizihloko zemidla yakho enikezwe ngumqeshi.